Ambatovy: nomena ny mponina ny hazo efa niasa | NewsMada
Ambatovy: nomena ny mponina ny hazo efa niasa
Nozarain’ny orinasa tetikasa Ambatovy maimaimpoana tamin’ny fikambanan’ny tantsaha Fimiam, any Moramanga, ny hazo efa avy nampisainy ka tsy ilainy intsony, toy ny vata, lafika entana (palettes, sns) tany amin’ny toeram-pitrandrahany any Ambatovy Moramanga. Nanomboka ny taona 2017 ny nanaovan’Ambatovy izany fanampiana izany.
Nanomboka ny volana marsa 2019 teo, nanapa-kevitra ny fikambanana Fimiam, fa havadiny ho lasa fanaka ireo hazo efa nampiasaina ireo, toy ny seza, latabatra, hanomezan-danja tsara kokoa. Natao kitay kosa ny ambin-kazo. Niteraka asa ho an’ny tanora izany ka mampiasa mpandrafitra roa matihanina ny fikambanana, ankehitriny.
Nilaza ny filohan’ny Fimiam, Ratovonary Edmond, fa mahabe fanantenana ity tetikasa ity, satria efa maro sahady ny mpanjifa namandrika entana ao amin’izy ireo, na tsy mbola nanomboka nivarotra aza. Manatsara ny fidiram-bolan’ny tantsaha monina manodidina ny toeram-pitrandrahana, ahafahana mividy masomboly sy akora hafa.
Taratry ny fahaiza-mitantan’ny Tetikasa Ambatovy manome tombontsoa ny fiarahamonina manodidina ihany koa izao.